Atụmatụ nkuzi n'efu - Nkwụghachi ụgwọ --gwọ - Atụmatụ nkuzi nke ụlọ akwụkwọ
Home Atụmatụ nkuzi n'efu
Ihe kpatara ụlọ akwụkwọ ji chọọ ihe mmụta na ịntanetị na ịse foto kacha mma ka a chịkọtara n'okwu a…
Uniquezọ anyị pụrụ iche si elekwasị anya na mmetụta nke ịntanetị na-emetụta ụbụrụ nwa. Ndị Royal College of General Practitioners nabatara anyị dị ka ndị nkuzi. Maka nkọwa ndị ọzọ gbasara mmetụta porn na ụbụrụ anyị na-akwado ndị nwere ike ịnwetaBrain gị na Intanet Internetntanetị na-akpali agụụ mmekọahụ na Sayensị Na-adịghị Eke nke ictionictionụ Ahụhụ”Nke Gary Wilson dere. Maka nkọwa ndị ọzọ lee sidebar n'aka nri.
Na enweghị iwu nkwenye afọ na ọ nwere ike inwe ọtụtụ mkpọchi na ụmụaka nwere ohere ịnweta saịtị porn, Regwọ hasgwọ ahụ kpebiri ịme usoro nke 7 nkuzi maka n'efu ka ọ nweghị ụlọ akwụkwọ kwesịrị ịga na-enweghị. Nabata inye onyinye maka ọrụ ebere anyị, ọ bụrụ na ọ masịrị gị. Hụ bọtịnụ “Nye onyinye” n’aka nri.
A naghị egosi ihe ọ bụla na-akpali agụụ mmekọahụ n'ihe ọ bụla. Iji nyochaa ọdịnaya nke nkuzi ọ bụla, gaa na ngwugwu peeji ahụ wee pịa onyonyo nke nnukwu ngwugwu maka mba gị. Anyị emeela nkuzi na mbipụta dị iche iche iji gboo mkpa gị, UK, American na International. Anyị nwere nkuzi ọzọ agbasoro iwu nke England na Wales, na nke Scotland.
Re: Sexting, the Law na You: Ọ nyere aka nke ukwuu. Akụkọ ndị ahụ na-amasị ha, ha kpalikwara ọtụtụ mkparịta ụka. Anyị tụlekwara iwu iwu nke a ga-atụle nke ọma. Saidmụ akwụkwọ kwuru na ha anabatabeghị aka na inweta ihe ọ bụla gbasara mmekọahụ / foto dịka “ọ na-eme oge niile”. Ha kwuru na ha leghaara ya anya n’ihi na ọ bụghị nnukwu nsogbu. Anyị chọpụtara na ọ bụ ihe ịtụnanya. Site na ndị nkuzi 3 nọ na St Augustine's RC School, Edinburgh.
Nye ụmụ akwụkwọ gị ọtụtụ okwu gbasara ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ na ịntanetị na mmekọrịta nwoke na nwanyị metụtara ahụike na ahụike, ntụkwasị obi, mmekọrịta, nnweta, mmanye, nkwenye na iwu. Nke a bụ ụzọ kachasị mma iji kwadebe ha maka ndụ na ịntanetị na n'ịntanetị yana iji wulite ike imegide nsogbu dị ogologo oge.
Ihe nlere intanet
Ihe omumu anyi na enye 4 ihe di iche, ma o nwere mmekorita nke okwu a. Upmụ akwụkwọ ga-enwe ohere iche echiche nke ọma banyere isiokwu a site na iji obi ụtọ, mmemme mmekọrịta, vidiyo na ohere maka mkparịta ụka na oghere dị mma yana akara ngosi maka akụrụngwa maka nkwado ọzọ:
Ihe na-akpali agụụ mmekọahụ na ikpe
Hụnanya, akpali agụụ mmekọahụ na mmekọrịta
Ihe na-akpali agụụ mmekọahụ na andntanetị na Ahụike Echiche
Lee Ihe Mmụta
Anyị na-enye nkuzi 3 dị iche iche, mana nwere njikọta n'okwu a iji kpuchie ọtụtụ akụkụ dị iche iche nke nsogbu a. Karịsịa ihe niile ọ na - akuziri ụmụ akwụkwọ gbasara atụmatụ pụrụ iche nke ụbụrụ ha dị egwu, nke na-eto eto na otu ha ga - esi jiri ya mee ihe nke ọma na ndụ:
Mmekọ nwoke na nwanyị, foto ndị gba ọtọ na ụbụrụ nwatakịrị
Mmekọahụ, Iwu na Gị
Egosi 35 pụta
Okwu Mmalite nke Sexting, American Edition
Okwu Mmalite nke Sexting, Scottish Edition
Hụnanya, Ihe-akpali agụụ mmekọahụ na Mmekọrịta
Hụnanya, Ihe na-akpali agụụ mmekọahụ na mmekọrịta, American Edition
Hụnanya, ihe na-akpali agụụ mmekọahụ na mmekọrịta, mbipụta Scottish
Ihe na-akpali agụụ mmekọahụ na Ahụike
Ihe na-akpali agụụ mmekọahụ & Ahụike Echiche, American Edition
Ihe na-akpali agụụ mmekọahụ & Ahụ Ike Uche, Akwụkwọ Scottish
Ihe na-akpali agụụ mmekọahụ na ụbụrụ Brain
Ihe ndi na-akpali agụụ mmekọahụ na ụbụrụ na-eto eto, Editiondị Scottish
Ihe na-akpali agụụ mmekọahụ na ọnwụnwa, mbipụta American
Ihe na-akpali agụụ mmekọahụ na ọnwụnwa, mbipụta Scottish
Mmekorita nwoke na nwanyi, ihe ndi gba ọtọ na umuaka ndi America, American Edition
Nnukwu Ahụhụ Porn, American Edition
Nnukwu Ahụhụ Porn, mbipụta Scottish